Waxa inbadan is waydiina ama inagu soo noqnoqta in wax badan ka qaldanyihiin haba maamulak cisbitaalada dalkeena taaso igu kalifatay inaan Qoro maqaalkan oo ku saabsan habab lagu maamulo cisbitalda si loo helo tayo caafimaad oo dhammaystiran Dalkeena .
Markaynu ka hadalyno maamul ama kalmada maamul waa waxa ad u fudud laakiin marka si dhaba loo galoo way adkaata waanay balaadhata,
Waa maxay maamul hadaba .
Maamulku waa ka
qorsheeya ,maamula ,hogaamiya iyo hirgaliyaha sida loo gaadho hadaf iyo ujeedo dheer oo laga leeyahay hadaba meesha la maamulayo .
1. Dhiiri galinta iyo isla xisaabtanka shaqalaha( . Encourage Accountability)
La xisaabtanka iyada oo la macno ah in dhammaan shaqaalaha cisbitaalka ay tahay in lala xisaabtamo shaqadooda maalinlaha ah, howlaha loo xilsaaray, wax ay qabanayaan , bartilmaameedkooda iyo wixii ay ku qabteen bil ama toddobaad.
Nidaamkan oo u saamixi doona maamulaka helida shaqada rasimigaa ee shaqaalaha Waaxkasta,waxayna xaqiijin doontaa hab maamulka cisbitaal oo wanaagsanaada.
Dhiirigalinta shaqaalahu waxay kor u qaada shao wanaag iyo horumar ay sameeyan shaqaaluhu markastoo ay helan Dhiirigalin (motivation ).
Shaqalaha wanaagsan ku abaal marinta waxayaalo farxad galiya oo ku dhiiri galiya kuwa kelan inay dadaalan .
Dhibta ugu badan ee haysata shaqalaha waa dhiirigalin la,aan ay kal kulmaan goobta ay ka shaqaynayaan .
Dhiiriagalintani waxay kor u qaadi doontaa goobta shaqada iyo keenista hore usocod.
2 Tababarka Shaqaalaha cisbitaalkaaga (Train Your Hospital Staff)
Mar kasta oo shaqaale cusub yimaado dhakhtarka, hubi in ay ku habboon yihiin shaqada maamulka isbitaalka. Taas waxaa dheer, tababarida shaqaalihii hore oo la casriyeeyo xirfadahooda maaraynta iyo sidoo kale xirfadaha farsamada.
U oggolow inay isku qoraan koorsooyinka qaarkood oo wax ka beddeli kara xirfadahooda kana dhigi kara maamuleyaal isbitaal oo wanaagsan.
Ku soo bandhig tababbarka cisbitaalada dhexdiisa.
3 Adeegsiga Teknolojiyad Sare.( Use Advanced Technology)
Mamulka cisbitaalku kaliya maaha inay la macaamilaan bukaanka iyo soo gelitaankooda. Waxyaabo farabadan ayaa isku xiran.
Laakiin haddii nidaamka cisbitaal oo dhan uu otomaatig u yeesho – waxay badbaadin doontaa waqti, waxay hubin doontaa maamul wanaagsan, waxay u baahan doontaa shaqaale ka yar waxayna u adeegtaa bukaanno badan si wax ku ool ah. Isticmaalka teknolojiyada waa in lagu dhex daraa daryeelka caafimaadka
4 Samaynta Nidaam Daryeel Maamul(Develop Managed Care System)
Waa inuu jiraa nidaam daryeel oo si habeysan loo maareeyay oo loogu talagalay cisbitaallada. Tusaale ahaan ,dhakhaatiirtu waa inay waqtigooda ku yimaadaan, dhakhaatiirta waa inay diyaar ahaadaan, dhakhaatiirta qalliinka waa inaysan dib u dhigin qalliinka iyo qalliinka, inta badan daawooyinka la dalbo waa in horay loo dalbo wax walbana si wanaagsan loo maareeyo. Tani waa sida cisbitaal kasta uu u horumarin karo maamulkiisa.
5 Samee Istaraatiijiyad Wada-xidhiidh (Make a Communication Strategy)
Wada-xidhiidhka shaqaalaha ,bukaanka iyo maamulku waa halka u baahan in wax badan laga badalo lana sameeyo xidhiidh wanaagsan oo dhex maraa intaaba si loogu kalsoonado shaqalaha iyo maamulkaba .
Waxan in badan bukaanadu ka cawdaan xidhiidhka ka dhexeeya iyaga iyo shaqalaha oo liita .
Isgaarsiintu waa aag ay cisbitaallo badan iyo waaxo daryeel caafimaad ay kala kulmaan dhibaatooyin. Xidhiidhka ka xun ee ka dhexeeya dhakhaatiirta iyo bukaanka, shaqaalaha iyo xitaa cisbitaalka dhexdiisa waxay horseed u tahay maamul xumo nidaamka maamulka oo dhanka cisbitaalka.
Dhan kasta waa inuu abuuraa xidhiidh wanagasan oo keenaya is fahanka dhexdooda.
6 Aqoonso Meelaha ugu Nugul (Areas of Vulnerability)
Maxay yihiin aagagga uu cisbitaalku ka guul darreystay waa maxay su,aalaha cisbitaal walba inuu ogaado ay tahay ?
Falanqaynta noocan ahi waxay ka caawin doontaa isbitaalada iyo dhakhaatiirta inay ogaadaan meelaha nugul, in badana diiradda la saaro, xoojinta aagagga daciifka ah, hagaajinta hufnaanta iyo shaqalaysiinta dadka ugu wanaagsan meelaha nugul una baahan kobcinta.
7 Xakamaynta Qeybaha Muhiimka ah(Control Important Departments)
Waxa jira qaybo waaxo u baahan feejignaan dheeri ah tusaale ahaan,qaybta gurmadka degdega iyo qaybta qaliimada
Waaxahasi waa inay lahaadaan shaqalihii ugu wanaagsan iyo nidaamkooda ugu fiican sida si loo wanaajiyo adeegyada, loona muujiyo maamul wanaagsan oo ay bukaannada ku qancaan.
8 Diirada saar Bukaanka (Focus on Patients)
Wax kasta oo Cisbitaal sameeyo, ha ahaato sameynta siyaasado cusub, shaqaaleynta shaqaale cusub, adeegsiga aalado cusub iyo horumarsan
diiradda ayaa ah inay ahaato bukaanka.
Markay cisbitaal bartaan sida loo maareeyo bukaanka, loo daryeelo baahiyahooda oo si guul leh loola macaamilo- maamulku wuxuu noqdaa mid hagaagsan. Ma jiro maareyn haba yaraatee haddii aad haysatid qalabka ugu fiican uguna horumarsan, dhakhaatiir aqoon fiican leh laakiin bukaanku ay silicsan yihiin.
W/Q Abdi Fatah Adam mouse
(Public health professional )